Tantaran'ny orinasa - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Desambra 2019 ~ Janoary 2020
Rehefa miomana am-pifaliana amin'ny fifandraisan'ny taona vaovao ny olona manerana ny firenena, dia hisy ady mangingina erak'izao tontolo izao, mamakivaky ny tanin'i Sina manontolo. Nisy fotoana dia olona maro no voan'io aretina io, ary raiki-tahotra ny firenena iray manontolo. nanomboka nisoroka ny valanaretina izahay, ary efa voahidy daholo ny olona.
Tany am-piandohan'ny volana Janoary 2020
Ireo mpitarika ny orinasa dia miahiahy momba ny fivoaran'ny toe-javatra misy ny valanaretina. Ny orinasa miahiahy momba ny tanindrazana sy ny vahoaka. Raha misy ny valan'aretina, dia misy dokotera sy mpitsabo mpanampy mitafy akanjo fotsy isaky ny faritany ary mandeha any retrograde, VoW handresy ny ady amin'ny valanaretina.
Volana volana Janoary 202
Nipoaka ny valanaretina. Na izany aza, ireo firenena rehetra ireo dia miady am-po sy fanahintsika rehetra. Raha misy fahasahiranana amin'ny lafiny iray dia ho tohanan'ny lafiny rehetra izy io. Nampahafantatra ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana fa ny fanaovana sarontava dia afaka misoroka ny valanaretina。 Ireo mpitarika ny orinasa dia te-handray anjara amin'ny ady amin'ny valanaretina ary mandray anjara lehibe amin'ny ady.
Ny faran'ny volana janoary 2020
Ny lehiben'ny orinasa dia nanapa-kevitra ny hanova ny drafitry ny orinasan'ny orinasa amin'ny taona manaraka. Nampiasainy ny vola nampiasaina tany am-boalohany mba hanitarana ilay zavamaniry sy ilay zavamaniry ho an'ny fanararaotam-pahefana maloto, fanadiovana ny zavamaniry ho famokarana sarontava, ary ny vola nampiasaina hividianana milina vaovao sy fitaovana famokarana. te hanampy amin'ny ady amin'ny valanaretina izahay. Avy eo dia nanomboka niomana hiady amin'ny valanaretina ny orinasa iray manontolo.
Tany am-piandohan'ny Febroary 2020
Nomaninay avokoa ireo zavamaniry mpamokatra sy famokarana fitaovana ireo, Ary ny masinina fanaovana maska ​​dia voadidy tamim-pahombiazana, ireo mpiasan'ny orinasantsika rehetra dia miomana hamokatra sarontava hiadiana amin'ny valanaretina.
Anshun Health And Medical Technology Co., Ltd. dia naorina tamin'ny fomba ofisialy b. Nahazo kojakoja ara-pitsaboana, fahazoan-dàlana hamokatra, lisansa fahasalamana, sns.
Volana faran'ny Febroary 2020
Tonga tao amin'ny orinasa ny masinina famokarana maska ​​andiany voalohany, ary nanomboka namokatra ilay Face Mask azo ampiasaina amin'ny ady amin'ny valanaretina izahay.
23 martsa 2020
Ilay sarontava azo arovana sy saron-tava Kn95 novokarin'ny AKF dia nahazo fahaizana araka ny fenitra fitsapana GB2626- 2006.
Ilay sarontava azo novokarin'ny AKF dia nahazo mari-pahaizana fanamarinana CE. Ny saron-tava Kn95 novokarin'ny AKF dia nahazo mari-pahaizana fanamarinana CE.
Eo ambany fitarihan'ny sefo hendry dia nampitombo ny lamin'ny famokarana ny orinasa ary nanondrana sarontava miaro hatrany amin'ny ady amin'ny valanaretina. Ny maska ​​nataonay dia nitana andraikitra lehibe tany Sina manontolo.
Ny faran'ny martsa 2020
Ny fahaizantsika mamokatra dia nampitomboina hatramin'ny an'arivony voalohany 1 andro ka hatramin'izao 300-500 arivo / andro izao, ary mbola mitombo hatrany ny fahaizan'ny famokarana hopitaly, faritra voan'ny areti-mandringana sns.
Nanomboka nanaiky ny mpanjifa fanondranana, ary koa ny fanomezana an-trano vitsivitsy ny orinasanay。 Tao anatin'ny fotoana fohy dia hita ny vokatra sarontava AKF any amin'ny firenena sy faritra maro manerantany, ao anatin'izany i Eropa, Alemana, Fanjakana Mitambatra, Aostralia, Russia, Hong Kong , sns. Nanana andraikitra lehibe izy io nandritra ny valan'aretina.
Amin'izao fotoana izao, nilamina be ny fahasalaman'i Shina, saingy tsy azo ajanona ny làlan'ny famokarana, ary tsy azo odiana ny fisorohana ny valanaretina. Tianay ny manampy ireo mpirahalahy sy rahavavy eran'izao tontolo izao hiady amin'ny valanaretina. Ho tsara kokoa ny ho avy.